Growing US interest in Zim - The Zimbabwean
Growing US interest in Zim
American businesspeople are beginning to change their negative opinion about doing business here, with a growing number of US companies contacting the local embassy to learn about business opportunities, US Ambassador Charles Ray has said.
Ambassador Ray made the remark to welcome a business delegation from Chicago, USA with keen interests to do business in Zimbabwe. The delegation's visit on November 14, 2011 was facilitated by the American Business Association of Zimbabwe.
ABAZ has been working hard to spread the word that Zimbabwe is open for business, according to Ray.
"ABAZ is doing great work to open doors. The association is growing partnerships with Mr Higginbottom, the Corporate Council on Africa and the US Chamber of Commerce. Other organizations are helping American companies gain a clear picture of business conditions in Zimbabwe so they can make informed decisions about available opportunities," said Ray.
Ray added that US businesspeople were coming to Zimbabwe because the economy was growing and trade and investment ties between the US and Zimbabwe were improving.
Zimbabwe is the fastest-growing economy in Southern Africa and among the top three fastest-growing on the continent. Ray encouraged Zimbabwean politicians to liaise with visitors from Chicago on potential investment opportunities.